Repuso: Qokelela, ulawule, kwaye upapashe uPhononongo lwabathengi bakho kunye neeWidgets zoBungqina | Martech Zone
Sincedisa amashishini aliqela asekuhlaleni, kubandakanywa umlutha weendawo ezininzi kunye nekhonkco lokubuyisela, ikhonkco lamazinyo, kunye nesibini samashishini eenkonzo zasekhaya. Xa sasikhwela kwaba bathengi, ndothuka ngokunyanisekileyo, ngenani leenkampani zasekhaya ezingenazo iindlela zokucela, ukuqokelela, ukulawula, ukuphendula, kunye nokupapasha ubungqina kunye nophononongo lwabathengi.
Ndizakuyichaza le nto ngokungathandabuzekiyo… ukuba abantu bafumana ishishini lakho (umthengi okanye i-B2B) ngokusekwe kwindawo okuyo, utyalo-mali kwi iqonga lolawulo lokuphonononga iya kodlulwa kakhulu lishishini eliza nalo! Yeyiphi imizekelo yoku? Phendla ngolu hlobo lulandelayo:
Ikontraki yophahla eKarmele, IN
Ugqirha wamazinyo we-Medicaid kubantwana abakufutshane nam
Olu phendlo lwejografi luza kubangela ukuba kuboniswe ipakethe yemephu kwiphepha leziphumo zokhangelo.
Yintoni iMaphu yokupakisha?
Xa abathengi okanye amashishini befuna ubutyebi bendawo, badibana neziphumo zenjini yokukhangela iphepha (SERP) elawulwa yi ipakethe yemephu. Ipakethi yeemephu ngummandla weSERP edwelisa amashishini abekwe kufutshane nawe kwaye uwadwelise ngokubaluleka kwawo, ukuphindaphindwa kophononongo, ukuphinda kuphononongwe, kunye nokulinganisa kwawo.
Ipakethi yemephu yile hayi ichatshazelwe kusetyenziso lwe-injini yokukhangela (SEO), isicwangciso sakho somxholo, isicwangciso sakho sentlalo, okanye isicwangciso sakho sentengiso. Ipakethi yeemephu ilawulwa ngokupheleleyo luluhlu lweshishini oluchanekileyo kunye namanqaku alungileyo angaguqukiyo!
Ke, ukuba ulishishini lendawo kwaye umcebisi wakho wentengiso okanye iarhente ayiphumezanga ulawulo lophononongo… bakwenza kakubi.
Yintoni uLawulo loPhononongo?
Uphononongo lwamaqonga olawulo abonelela ngazo zonke iinkonzo eziyimfuneko ukuze:
Qokelela uphononongo - Qokelela ukuphononongwa kubathengi bangoku ngokuthumela ikhonkco lokuphonononga nge-imeyile okanye isicatshulwa emva kokuba iprojekthi okanye inkonzo igqityiwe.
Qokelela uphononongo oludlulileyo – Qokelela uphononongo kubathengi bangaphambili abangalungenisanga uphononongo. Ezi zicelo zikhohliswa ngamaxesha athile kwaye ngokuphindaphindiweyo ukuze uqhubeke uqokelela uphononongo ngokungaguqukiyo endaweni yephulo elinye elikhulu (elinokubonakala lingekho ngokwemvelo kwi-injini yokukhangela).
Yabelana ngohlolo -Xa uphononongo olukhulu lokuqala lubhaliwe, khuthaza umthengi ukuba abelane ngophononongo kuwo wonke amaqonga eendaba ezentlalo.
Hlaziya izilumkiso -Yazisa iqela lakho langaphakathi ngophononongo olungenisiweyo kwaye uhambise indlela yempendulo efanelekileyo. Ukuba ayinayo, ungafikelela kwimizamo yokuyilungisa le ngxaki. Ukuba ine-positive, unokumbulela umntu ngokuthatha ixesha.
Ubungqina boluntu -Xa umntu onokuthi athenge endwendwela iwebhusayithi yakho, bayayifuna Ubungqina ukuba inkampani yakho inokuthenjwa. Ukuba namawijethi okanye iphepha lokuphonononga kwindawo yakho kunokukhuthaza umthengi onokuthi afikelele. Ngaphandle kobungqina bentlalontle, abathengi abazikhathazi. Iqonga elikhulu lolawulo lophononongo libonelela ngeephaneli kunye neepopups onokuba nazo kulo lonke iphepha lakho ukubonisa ukuba ishishini lakho lenza umsebenzi omkhulu.
Repuso Review Management Platform Overview
Repuso liqonga lolawulo lophononongo elinazo zonke iimpawu ezibalulekileyo kunye nokusebenza okufunwa lishishini lakho ukuqokelela, ukulawula, kunye nokupapasha uphononongo lwakho:
Qokelela - Repuso ibeka iliso kuwo onke amajelo eendaba ezentlalo ukuze ajongwe ngabathengi bakho. Uphononongo lungaqokelelwa kusetyenziswa i-Repuso's site widgets.
Hlela -Khetha uphononongo lwakho oluthandayo kwi Repuso Ideshibhodi yokubonisa kwiwijethi. Yaziswa kwaye wenze oku ngexesha lokwenyani usebenzisa iRepuso app!
Bonisa -Yandisa uguqulelo lwewebhusayithi yakho ngokubonisa uphononongo olukhethiweyo RepusoIwijethi edadayo okanye emgqeni kwawona maphepha abalulekileyo.
Iwijethi zokuphononongwa kobungqina bomthengi zibandakanya uphononongo loluhlu, iibheji ezidadayo, isilayida, ifleshi, iwijethi edadayo, igridi yophononongo, uphononongo lwangaphakathi, izilayidi zokuphonononga iifoto, kunye nokunye.
Repuso idibanisa kunye kwaye ibeke iliso kuwo onke amaqonga eendaba ezentlalo kunye namaqonga ophononongo, kubandakanya i-Facebook, i-Twitter, i-Instagram, i-Zendesk, i-iTunes, i-Google Play, iNwabile, iShishini likaGoogle, GetApp, Capterra, G2, Thumbtack, Trustpilot, Tripadvisor, Yellow Pages, Airbnb, Healthgrades, Vrbo, Booking.com, GetYourGuide, Expedia, Zillow, Houzz, HomeAdvisor, Angi, BBB, OpenTable, kunye neRealtor.com.
Yenza iAkhawunti yeRepuso
Ukuziphendulela: Ndiyinxalenye ye Repuso kwaye ndinxibelelanisa nabathengi abaninzi, kubandakanya nefemu yam, kweli nqaku.
tags: AirbnbandiUluhlu lwee-angiesbbbBooking.comcapterraukuqokelela uphononongoNdonywatyisiweExpediaFacebookg2getappgetyourguideuphandoIshishini kugooglegooglezempiloumcebisi wasekhayahouzzinstagramItunesukukhangela kwendawoyendawo seophatha uphononongoipakethe yemephuOpenTablecwangcisa uphononongoiireyithingi widgetRealtorrealtor.comrepusouphononongo lolawuloiqonga lolawulo lokuphononongaiwijethi yophononongoSEOinyokabonisa uphononongoiwijethi yobungqinai-thumbtaackIngcebisoEzintathuumvaTwittervrboiphepha elityheliYelpzendeskzillow
Gorgias: Linganisa iMpembelelo yeNgeniso yeNkonzo yakho yabaThengi be-Ecommerce